Shina tsara indrindra 3 teboka tokana pto roter ho an'ny traktera Factory sy mpanamboatra | Zhicheng
Mandeha amin'ny traktera Rotary Tiller
4 Wheeler Mini Wheel 2WD
Traktera Mini 4 Wheel 4WD
Milina fametahana sy zezika
Masinina ambanin'ny tany
Borosy Cutter Grass
Masinina fandevenana voaloboka
Mpamboly rotary pto tsara indrindra ho an'ny traktera
Rotary mpitrandraka dia masinina fambolena mifanaraka amin'ny traktera hamita ny asa fambolena sy fikarohan. Noho ny fahaizany mamotika ny tany sy ny faritra fisaka aorian'ny fambolena azy, dia be mpampiasa izy io; Mandritra izany fotoana izany dia afaka manapaka ny vodin-kazo milevina ao ambanin'ny tany izy, izay mety amin'ny fiasan'ny mpiambina ary manome fandriana masomboly tsara ho an'ny famafazana taty aoriana.
Antsoy izahay raha mila vaovao: 0086 18764704890
Miasa sakan'ny (mm)
Halalin'ny fatrany (mm)
Hery fampifanarahana (kw)
fitaovana transmission fitaovana transmission fitaovana transmission fitaovana transmission fitaovana transmission fitaovana transmission fitaovana transmission fitaovana transmission fitaovana transmission
Hafainganana mihodina r / min
No. ny lelany
Taratra boribory (mm)
miaraka amin'ny traktera
fampiatoana teboka teloZiona fampiatoana teboka teloZiona fampiatoana teboka teloZiona fampiatoana teboka teloZiona fampiatoana teboka teloZiona fampiatoana teboka teloZiona fampiatoana teboka teloZiona fampiatoana teboka teloZiona
Ity mpamboly rotary ity dia manana ny asany amin'ny famakiana ny faran'ny angadinomby, famerenana amin'ny laoniny ny firafitry ny tany, fanatsarana ny fahaizan'ny fitehirizana ny tany, fanesorana ny tsimparifary sasany, fampihenana ny aretin'ny zavamaniry sy ny bibikely, ny fanamafisana ny tany ary ny fampiakarana ny fenitry ny fambolena fiasa mekanisation.
1. Fampitana: roahina ny rojo.
2. Vata famonoana grafite dia vita amin'ny vy fanariana.
3. Ny endrika takelaka fampiatoana dia vita amin'ny fanapahana laser, ny toerana famolahana.
4. Fitaovana tanana azo zakaina.
5. Ny takelaka fiarovana dia ampiana amin'ny fiolahana any aoriana.
6. Ny haavon'ny fambolena dia azo ovaina.
7. Eo ambanin'ny varotra mafana sy fitsapana manokana ny lelany
Mpamboly rotary adidy mavesatra
Flap aoriana azo ovaina ho an'ny fiarovana ary koa manome famaranana milamina ~ 6 blades mahery mahery isaky ny flange ho an'ny fambolena ny tany ambony kokoa ~ Tselatra azo ahitsy ho an'ny fanaraha-maso lalina ~ famolavolana mahery vaika ho an'ny fiainana lava & azo itokisana.
Tombony amin'ny orinasa misy antsika
1. Efa niasa tamin'ny milina fiompiana nandritra ny 10 taona mahery izahay.
2.Manana fitaovana tsara sy rafitra fanaraha-maso kalitao tsara izahay.
3. Ny orinasanay miorina amin'ny valan-javaboary misy fitaterana mety.
4. Afaka mamokatra maherin'ny 2000 ny mpamboly rotary isam-bolana.
Teo aloha: Ampidiro ny mpantsara tratra tratra amin'ny ce
Manaraka: Mpamboly hitifitra teboka telo / 3 4 5 6 7 ft mpiompy rotary amidy
3 Point Tiller amidy
3 Tillers teboka ho an'ny tractors
Adiresin'ny orinasa: Village shaowengmiao, Tanànan'i Junbukou, Distrikan'i Weicheng, Tanànan'i Weifang, Shandong, Sina
Adiresin'ny birao: Room1608, tranobe Jintai, zorony avaratra andrefan'ny fihaonan'i Dongfeng West Street sy Changsong Road, Distrikan'i Weicheng, Weifang City, faritanin'i Shandong
Telephone Office: 86-0536-2100684
Finday: 0086 18764704890